MOTEA Factory | China MOTEA Manufacturers, Suppliers
MTD011A dia natao ho an'ny sehatra fampiharana ivelany toy ny fetiben'ny sakafo, hetsika ivelan'ny trano, karnavaly sy ny sisa amin'ny fiheverana ny fahafahan'ny fametrahana. Ny haingo amin'ity tobin-dite ronono ity dia azo amboarina amin'ny lafiny fampiharana samihafa. Satria ity vokatra ity dia natao ho karazana misokatra, dia azo atambatra sy disassemble mora foana eo amin'ny toerana. Ankoatr'izay, ny famenoana fitaovana dia mora raisina amin'ny fotoana rehetra. Ny gara ivelan'ny trano fisotroana ronono robot dia afaka manamboatra dite ronono perla, dite voankazo ary dite yaorta. Ny dingana rehetra amin'ny fanaovana zava-pisotro dia miasa amin'ny alàlan'ny sandry robot miara-miasa ho azy araka ny baiko napetraka amin'ny alàlan'ny efijery fikasihana eo an-toerana miaraka amin'ireo rafitra fandoavam-bola manohana ny WeChat pay sy Alipay. Ny tsiron'ny zava-pisotro sy gilasy dia azon'ny tsirairay ovana amin'ny alalan'ny fanovana ny haavon'ny siramamy, ny mari-pana amin'ny fisotroana ary ny fatran'ny additives mafy.
Kiosk Dite Ronono-damaody vaovao ho an'ny sehatra fampiharana an-trano
Robot dite ronono kiosk MTD031A dia natao ho toy ny voahidy karazana kiosk ho an'ny anatiny fampiharana toe-javatra toy ny toeram-pivarotana lehibe, oniversite, birao trano, fitaterana foibe sy ny tontolo anatiny hafa. Ity kiosk dite ronono robot ity dia misy sandry robot iray hanaovana ny zava-pisotro malefaka araka ny baiko napetraka amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny rafitra fandoavam-bola manohana ny WeChat pay sy Alipay. Ny dingana rehetra amin'ny fanamboarana zava-pisotro malefaka dia miasa amin'ny alàlan'ny sandry robot miara-miasa ho azy miaraka amin'ny famantarana mazava amin'ny fotoana tena izy, mampiseho ny dingana ankehitriny amin'ny fanaovana dite. Ity toeram-pisakafoanana dite ronono ity dia ahitana karazana zava-pisotro telo, dia dite ronono perla, dite voankazo ary dite yaourt. Ny tsiron'ny tsiro dia azo amboarina amin'ny alàlan'ny fanovana ny haavon'ny siramamy, ny mari-pana amin'ny fisotroana ary ny fatran'ny additives mafy. Ankoatr'izay, ny fiasa manokana mialoha ny famandrihana dia mety hahatonga ny mpanjifa ho mora kokoa amin'ny fametrahana ny baiko mialoha ary mahazo ny zava-pisotro tsy misy fiandrasana.